I-Semalt Expert - Izinto Omele Uzazi Ngobuqhetseba be-Inthanethi
Ubuqhetseba be-Intanethi bubhekisela kulwaphulo-mthetho apho, umenzi weqhinga uyilwaukusetyenziswa kwesinye okanye iipamitha ezininzi ngenjongo yokulahla ipropati nganye okanye nayiphi enye into ebangela umdla ngenkohlisoukubonakaliswa kwengxaki eyinyani kwaye ke, ukunika iinkcukacha ezingalunganga.
Ngoxhomekeke ekuthembekeni kwintanethi ngabathengi kunye nabanini-shishininjengendlela yokusebenzisana ngokubanzi: izinto ezithintelekileyo ezisebenzisana nekharityhulam efanayo ziya kunyuka. Kwiimeko ezininzi, intanethi inikwe amandlaImisebenzi yobuqhetseba inzima ukuyilandelela kwaye iyayikhetha, kwaye iyinkunzi enkulu ekujonganeni nayo.
uJason Adler, ingcali iSemalt IiNkonzo zeDivithali, zenzele ezinye iinyani ezinyanzelisayo malunga nobuqhetseba kwi-intanethi ukwenzela ukuba uncede ulungele ukuhlaselwa.
Ukususela kwiinkcukacha ze-intanethi kwiinkcukacha ze-malware, ulwaphulo-mthetho lwe-intanethi luqaleukufumana inkxalabo kwii-2000s zakuqala. Kwezinye iimeko, imbambano yabonwa njengongenelelo lokujongana nombandela kunokubaukubaluleka okwandayo kwe-intanethi kwimisebenzi yemihla ngemihla - apivita natural serum radiance 15ml. Ukunyanzeliswa kwamashishini kwi-imeyili kunye nokwanda okwandayo kwinaniabasebenzisi bewebhu banyuse izibonda zezemali. Ngokomzekelo, intsholongwane eyaqhekeza ngo-1999 yabangela umonakalo ofikelela kuma-dollar ayi-80.
Ukukhwabanisa okukhuselekileyo ngumsebenzi apho abenzi bobubi banika imali enkuluamathuba okanye amacebo ahloselwe ukuphazamisa imarike ngenjongo yokwenza inzuzo enkulu.
Ubuqhetseba besazisi bwenzeka xa umhlaseli efumana idatha ngaphandle kokwaziumnini kwaye isebenzise idatha malunga neenzuzo ezizimeleyo, iingeniso zemali..
Ngowe-2001, ingxelo ye-Intanethi ye-IFCC ibonisa ukuba lobuqhetseba be-intanethiukubalwa kwecala lokuphambuka kweepesenti ezingama-43 zezikhalazo. Ukongeza kwiindidi zolwaphulo-mthetho ezikhankanywe ngasentla, ubuqhetseba obukhuluizikhalazo kwindawo yokukhohlisa ubuqhetseba, ukukhwabanisa kwamakhadi kunye neentengiso.
Ngo-2003, ingxelo ye-intanethi ye-IFCC ibonise ukuba i-50 ekhulwini yabakhohlisi bewebhubabemi baseTexas, eCalifornia, eFlorida, eNew York nase-Illinois. Ingxelo kwakhona ibonisa ukuba kunzima kangakanani ukulandelela abaphangikwezo zolwaphulo mthetho.
NgokweSebe lase-US, elijongene nobuqhetseba be-Intanethi oku kulandelayoimimandla yangoku yezinto ezingekho mthethweni ezenziwa ngewebhu:
Ukuphathwa kweentengiso kunye nokukhwabanisa kwezokhuseleko ziimeko ezimbini eziboniswa yiLos Angeles.Kwiimeko zokuqala zokuphathwa kweemarike, abaphulaphuli bakwazi ukuhlawula imali yokufumana imali eyabelwe ukuthengisa izabelo eziye zanda ukusuka kwi-$ 8ukuya kwii-15 ezili-15 ngaphakathi kwithuba lemizuzu engama-45.
Kweminye imeko, abangaphezu kwe-100 base-U.S bezemikhosi basebehlaselwe ngamaxhoba olwaphulo.Abenzi bobubi bafumana iinombolo zokhuseleko loluntu kunye namagama ala magosa omkhosi kwi-intanethi kwaye emva koko, basebenzisa eziUbunikazi bokufaka izicelo zamakhadi-mboleko.
Ngo-1999, i-FBI yayibandakanyeke kakhulu kwi-search efunyenweyo kumyili we-ai-virus yekhompyutha exhomekeke kwi-imeyile njengendlela yokusasaza izinto eziphathekayo. Kwiintsuku ezimbalwa, iipesenti ezingama-19 zase-USiinkampani kunye nezigidi ezili-1.5 zezixhobo zabexhoba kule imeyile.
Abahlaseli baqalile ukuhlaselwa kwiinkqubo zikaRhulumente waseUnited States. Kwi sibinileminyaka, abahlaseli babenokumelana neekhomputer zePentagon kunye namanye amagunya.